Soosaarahan Caanole Sare Oo Caan Ah Oo Fiican HDPE | Erbo
Magaca: HDPE Silsilad Ballaaran oo Liin dhanaan ah.
Cabir: 90cm * 60cm * 55cm.
Miisaanka: 8.5 ± 0.2 KGs / PC.
Astaamaha: Isticmaalka alaabta ceeriin ee HDPE, ultraviolet-proof, cimri dheer, fududahay in la rakibo, kharash yar, gaabiyo muddada dhismaha, yareeyo kharashka, yareeyo kharashka dayactirka. Muuqaalka midabka liinta waxaa loo isticmaali karaa calaamad digniin ah.
Bartilmaameedkayagu waa inuu noqdaa xoojinta iyo hagaajinta tayada sare iyo dayactirka badeecadaha hadda jira, isla markaa si joogto ah u soo saarno xalal cusub si loo daboolo baahiyaha macaamiisha gaarka ah ee loogu talagalay Baaskiilka Dhawaanba Imaanaya macaamiil badan iyo ganacsato.
Newly Imaanshaha Balaastikada sabayn baaldiga, Shirkadda Our nuugo fikrado cusub, xakamaynta tayada adag, kala duwan oo buuxa oo adeeg raadinta, iyo u hoggaansamaan in la sameeyo xalal tayo sare leh. Ganacsigeenu wuxuu ujeedkiisu yahay "daacadnimo iyo aaminaad, qiimo wanaagsan, macaamil marka hore", markaa waxaan ku guuleysannay kalsoonida inta badan macaamiisha! Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada iyo xalalka iyo adeegyada, waa inaadan ka waaban inaad nala soo xiriirto!
Waxaan caadi ahaan ka fikirnaa oo ku celcelinaa isbeddelka duruufaha, oo ku koraan. Waxaan hiigsaneynaa gaaritaanka maskax iyo jir taajir ah iyo 2019 Qurxinta Balaastikada ah ee Nakhshadeynta Ugu Dambeysa, Waxaan ilaalineynaa jadwalada bixinta waqtiga, naqshadaha kacaanka, tayada sare iyo daahfurnaanta iibsadayaashayada. Baaskiilkeenu wuxuu noqon lahaa inaan ku siino alaab tayo sare leh waqti cayiman.
2019 Nakhshadeynta Ugu Dambeysa ee Balaastikada Balaastikada ah, Waxaan si xiiso leh u dooneynaa inaan la shaqeyno shirkadaha shisheeyaha ah ee daryeela inta badan tayada dhabta ah, helitaanka xasiloonida, kartida xoogan iyo adeegga wanaagsan. Waxaan ku siin karnaa qiimaha ugu tartanka badan oo tayo sare leh, maxaa yeelay waxaan ahayn Takhasusle aad u badan. Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad soo booqato shirkadeena wakhti kasta.
Hore: HDPE Silsilad Buluug Buluug ah